Bangiga Adduunka oo ansixiyay 143 Milyan oo dollar oo loogu talagalay Soomaaliya – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Bangiga Adduunka oo ansixiyay 143 Milyan oo dollar oo loogu talagalay Soomaaliya
June 23, 2022 Xuseen 14
Waa in aad fahamtaan wuxu waa dayn markii la bixin waayana waa lagu gumeysan. Dhabcan lacagtaan waa la xadidoonaa,CCW iyo ragiisii.
CC Warsame oo shaqadii loo igmaday qabsanaya,70 jir 70 million haystaa ayaan arki doonnaa bisha soo socota.
Somalia Aid Corruption 2022 says:
Bangiga Aduunka- $143 milyan dollar
Benaadir- 100 milyan
Hirshabeele 15 milyan
Galmudug 15 milyan
Jubbaland. 10 milyan
Koofur Galbeed 2 milyan
Puntland 1 milyan
Ma aragteen hebelkaa culusow oo afar qoyskiisa ah meel imaaraadka ah kula shiray laguna sheegay jaaliyada soomaalida ee imaaraadka!!!!!!! Waxa imaaraadku siinayaa labaatan milion oo dirham mise dollar ma ogi kkkkk. Waxa kale oo uu kula heshiiyey in kor loo qaado tirada jaaliyada reer banaadir yacni (hawiye)!!!!! Madkiin intaasuu garan waayey farmaajo inuu soo xaf siisto korna u qaado jaaliyada reer gedo yacni (mareyxaan)kkkkkk
Ujeedo ::: maskiin farmaajo
Magaca somali waa magac la bahdilay oo million jeer lagu xaaray. Khaniiskii somali ayuu sheegan .. oo dhilodii way sheegan oo argagaxisadii iyo tuugadii why sheegan oo mujrimkii wuu sheegan.
Midkasta oo xumaan ku kacaya waxuu ku faanin in uu Yahay somali dalad ah. Umadaha kale marka ay faraha kula Jiraan foolxumo MA sheegtaan jinsigooda oo cido kale ayeey sheegtaan.
Dalkiina Soomaaliyeey qiimahahiisa waxuu ka badan yahahey nonillion, and decillion
Awdal, waxaa ka buuxa Oil,Dabiiciga Gas, Beeraha qudaarta oo dhan, galeyda, hadhuudhka, Bariiska, mazagada, gobolka Awdal waxaa ka buuxa qeyraadka dabiiciga ah ee ka mid aha Birta, Macdanta, Dheemanka, iyo buuraha la dhalaasho ee leh ciida Volco. Awdal waxaa ka buuxa qeyraadaka bada sida maaxa iyo Reefs Bada quraxda luulka iyo manaafacaadka bada.
Gobolka Bari, waxaa ka buuxa Oil,Dabiiciga Gas, Beeraha qudaarta oo dhan, Luubaanta, Xijiga, Gobolka Bari, waxaa ka buuxa qeyraadka dabiiciga ah ee ka mid aha Birta, Macdanta, Dheemanka, Uranium, Coal, Awoodda dabaysha, dhagax iyo ciid, hawada, iftiinka qorraxda, ciidda iyo biyaha, Xoolaha, shimbiraha,
kalluunka iyo dhirta, iyo alaabta ceeriin sida buuraha la dhalaasho ee leh ciida Volco. Gobolka Bari, waxaa ka buuxa qeyraadaka bada sida maaxa iyo Reefs Bada quraxda luulka iyo manaafacaadka bada.
Gobolka Shabeelada hoose , Aagga balaca iyo dhereka salka dhulka: 25,285 km²
Dhulkan shabeelada hoose 89% waa dhul Beeraad waxaa kuyaala 20 million oo ah aseendooyin. waxuu ka mid yahey gobolka koowaad ee ugu qeyraadka beeraha bada waxaa ka soo go’ a qeyraadka beeraha oo dhan, waxuuna ka badan yaha dadka Soomaliyeed oo dhan maamul fiican haduu helo, gobolka shabeelada hoose waa hanti qaranka Soomaaliyeed, waxaa beeraha gobolka bilaabey dowladii hore ee Somalia waxaa wadanka Soomalia oo dhan looga soo saari jirey quudka nafaqada dalkiina Somalia.
waxaa ka buuxa Oil,Dabiiciga Gas, Beeraha qudaarta oo dhan, galeyda, hadhuudhka, Bariiska, mazagada, gobolka Gobolka shabeelada hoose waxaa ka buuxa qeyraadka dabiiciga ah ee ka mid aha Birta, Macdanta, Dheemanka, leh ciida Volco. Gobolka shabeelada hoose waxaa ka buuxa qeyraadaka bada sida maaxa iyo Reefs Bada quraxda luulka iyo manaafacaadka bada
Gobolka Sook Aaga balaca dhulka 39,240 km²
uranium, iron ore, tiin, gypsum, bauxite, copper, Oil iyo Gaaska dabiiciga ah. dhulka Sool waa dhul Beeraley ah waxaa lagu dhaqaa Xoolaha geela ariga loda iyo shimbiraha waxaa ka buuxa ciid iyo dabeysha awooda leh.
Aaga iyo balaca dhulka: 31,510 km²
Gobolka Hiiran waa gobolka 3 ee ugu qeyraadka bada dalka Somalia qaasatan beeraha, gobolkaa waa dahin, Oil Gas iyo qeyraadaka beeraga awooda dabeysha bada iyo barida ciida shimbiraha kala nooca ah Fosfate
Gobolka togdheer Aaga balaca dhulka 30,426 km² gobolka togdheera waxuu ku bada beeraha waa dhul beeraad waxaa ku dhaqan xoolaha geela loda iyo ariga waxa lagu dhaqa shimbiraha nooca kala duwan, gobolka togdheer waa dihin dhul beeraad ah, qeyraadkiisa waxaa ka ah ciida macdanta sida oil gas dheeman, Phosphate
Gobolka Gedo Aaga balaca dhulka 85,000 km²
Gobolka gedo waa gobolka 4 ee ugu qeyraadaka bada gobolda Somalia
Waxaa gobolka can uu ku yahay beeraha iyo ugaarta noocyadeeda Kale duwan sida Warthog, Haramcad, Maroodi, Fennec Fox, Giraffe, Hippo, Impala, Jackal, Klipspringer, Libaax, Magpie, Otter, Porcupine, Quelea Quelea, Rhinoceros,
BEERAHA waxaa ka soo go beeraha nafaqada sisinta Somalia waa gobolka ugu mucajisada bada qobolkaan waxaa is ku wareegta labo wabi, qeyraadka gobolkaan waxaa ka mid ah Phosphate
Noolow ninka la baxay Soomaalia. Allaaha ku barakeeyo, Soomaali dhab ah.